ကလေးတစ်ယောက်က ဗီတာမင်C ဘယ်လောက် သောက်သင့်လဲ? - Chit MayMay
Home Parenting Child Nutrition ကလေးတစ်ယောက်က ဗီတာမင်C ဘယ်လောက် သောက်သင့်လဲ?
ကလေးတစ်ယောက်က ဗီတာမင်C ဘယ်လောက် သောက်သင့်လဲ?
ဗီတာမင်စီ (သို့) အက်စ်ကောဘစ် အက်ဆစ်က ကလေးရဲ့ ကျန်းမာကြီးထွားမှုနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အာဟာရတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ သစ်သီးတွေနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်အများစုမှာ တွေ့ရတဲ့ ဒီအာဟာရဟာ အလွယ်ကူဆုံးရနိုင်တဲ့ ဗီတာမင် ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် ဗီတာမင်စီက ကြွယ်ဝစွာရရှိနိုင်ပေမယ့်လည်း ကလေးတွေမှာ ဗီတာမင်စီချို့တဲ့မှု ဖွံ့ဖြိုးနိုင်ပါတယ်။
ကလေးတွေ ဘာ့ကြောင့် ဗီတာမင်စီ လိုအပ်တာလဲ?
ဗီတာမင်C ဟာ ကလေးရဲ့ ကြီးထွားမှုနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အရေးပါသော ခန္ဓာကိုယ်လုပ်ဆောင်ချက်တွေအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါတယ်။ ကလေးငယ်တွေအတွက် ဗီတာမင်စီရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေက အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အနာကျက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် အရေးပါသော ကော်လဂျင်ထုတ်လုပ်မှုကို ကူညီပေးပါတယ်။
၎င်းရဲ့ အင်တီအောက်ဆီဒင့်မြင့်မားတဲ့ ဂုဏ်သတ္တိကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ရှိ ဖရီးရယ်ဒီကယ်တွေရဲ့ ပျက်စီးမှုကို လျော့နည်းစေပါတယ်။
သွေးဖြူဥတွေကို နှိုးဆွပေးခြင်းဖြင့် ကိုယ်ခံအားကောင်းမွန်စေပါတယ်။
(အပင်မှ ရရှိသော) nonheme iron စုပ်ယူမှုကို ကူညီပေးပါတယ်။
အရိုးတွေကို ကျန်းမာစွာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပေးပါတယ်။
ဗီတာမင် C က ရေမှာပျော်ဝင်နိုင်တဲ့ ဗီတာမင်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်က မသိုလှောင်ထားနိုင်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် နေ့စဉ်အလုံအလောက်စားသုံးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
ကလေးတစ်ယောက်က ဘယ်အသက်အရွယ်မှာ ဗီတာမင်စီ သောက်သုံးနိုင်လဲ?
မိခင်နို့က ဗီတာမင် စီရဲ့အရင်းအမြစ်ကောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မွေးကင်းစကလေးငယ်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ ပထမဆုံး အစာစားချိန်မှစပြီး ဒီမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ ဗီတာင်မင်ကို စားသုံးကြပါတယ်။ ကလေးနို့ဖြတ်ချိန်မှာ စကျွေးသော လတ်ဆတ်တဲ့ သစ်သီးတွေနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များစွာမှာ ဗီတာမင်စီကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီကာလအတွင်း မွေးကင်းစကလေးတွေဟာ မိခင်နို့ (သို့) ဖော်မြူလာနဲ့ အစားအစာရဲ့ပေါင်းစပ်မှုကနေ ဗီတာမင်စီ ရရှိပါတယ်။
ဗီတာမင် C ချို့တဲ့သော ခြောက်လအထက် ကလေးတွေဟာ အာဟာရဖြည့်စွက်စာတွေကို သောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင် ပညာရှင်မှ အကြံပြုထားခြင်းမရှိဘဲ supplements တွေ သောက်သုံးတာက အန္တရာယ်မကင်းပါဘူး။
ကလေးတွေအတွက် ဗီတာမင်စီရဲ့ နေ့စဉ် ခွင့်ပြုပမာဏက ဘယ်လောက်လဲ?
ကလေးတွေမှာ ဗီတာမင်စီ လိုအပ်ချက်က အသက်အုပ်စုအလိုက် ကွဲပြားပါတယ်၊ အမျိုးသား အင်စတီကျူ့အရ လိုအပ်ချက်မှာ-
1–3 years (15mg)
4–8 years (25mg)
9–13 years (45mg) ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးတစ်ယောက်ဟာ ဗီတာမင်စီ လွန်ကဲစွာ ရနိုင်သလား?
ကလေးဟာ အစားအသောက်အရင်းအမြစ်တွေကနေ ဗီတာမင်စီကို အလွန်အကျွံမရနိုင်ပါဘူး၊ ထို့အပြင် ဗီတာမင်စီကို ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ သိုလှောင်မထားတာကြောင့် ပိုလျှံနေတဲ့ ပမာဏကို ဆီးနဲ့ ဖယ်ထုတ်ပါတယ်။
ဗီတာမင်စီ လွန်ကဲခြင်းရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေက ဘာတွေလဲ?
ဗီတာမင်စီ လွန်ကဲစွာ စားသုံးခြင်းက အစာအိမ်နဲ့ အူလမ်းကြောင်းကို အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်။
ဗီတာမင်စီ မြင့်မားစွာ သုံးစွဲခြင်းက သံဓါတ်ပိုစုပ်ယူမှုကို ဖြစ်စေတဲ့ မျိုးရိုးလိုက်ရောဂါဖြစ်သော hemochromatosis ရှိသူတွေမှာ သံဓါတ်လွန်ကဲမှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ သံဓါတ်လွန်ကဲခြင်းက ခန္ဓာကိုယ်တစ်သျှူးတွေကို ပျက်စီးစေတဲ့ အဆိပ်အတောက် ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ကလေးတွေအတွက် ဗီတာမင်စီ အရင်းအမြစ်တွေကဘာတွေလဲ?
ဗီတာမင်စီက သစ်သီးတွေနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်အများစုမှာ ပါဝင်ပါတယ်။
အချဉ်ဓါတ်ပါတဲ့ အသီးအနှံများ (လိမ္မော်သီး၊ သံပုရာသီး၊ သံပုရိုသီး)
ဗီတာမင်စီက အငွေ့ပြန်လွယ်ပါတယ်။ လှီးဖြတ်ခြင်း (သို့) အပူပေးခြင်းကဲ့သို့သော ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုနည်းလမ်းတွေက သူ့ရဲ့ထိရောက်မှုကို လျော့နည်းစေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အထက်ဖော်ပြပါ အစားအစာတွေကို ပြင်ဆင်ပြီး ချက်ချင်း စားသုံးပါ။
ကလေးမှာ ဗီတာမင်စီ ချို့တဲ့ရင် ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ?
အသီးအနှံနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေက ဗီတာမင်စီ လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းဖို့ လုံလောက်တာကြောင့် ဗီတာမင်စီ ချို့တဲ့ခြင်းက ရှားပါတယ်။ သို့သော်လည်း အစားဇီဇာကြောင်တဲ့ ကလေးတွေမှာ အပျော့စားချို့တဲ့မှု လာနိုင်ပါတယ်။ ကလေးတွေမှာ ဗီတာမင်စီ ချို့တဲ့ခြင်းရဲ့ လက္ခဏာ (၇)မျိုးက
Gingivitis (သွားဖုံးရောင်ခြင်းနဲ့ သွေးထွက်ခြင်း)
သုံးလထက်ပိုပြီး ပြင်းထန်တဲ့ ဗီတာမင်စီ ချို့တဲ့ပါက scurvy (ဟင်းသီးဟင်းရွက်အစားနည်း၍ ဗီတာမင်စီ ချို့တဲ့မှုကြောင့်ဖြစ်သော သွေးရောဂါ) လို့ခေါ်တဲ့ အခြေအနေကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ scurvy ရဲ့ လက္ခဏာတွေက
ခြေထောက်နဲ့ လက်တွေ နာကျင်ခြင်း
မွေးညင်းပေါက်တွေအနီးမှာ အရောင်အဖုတွေ ဖြစ်ခြင်း
ဗီတာမင်စီ ချို့တဲ့သော လက္ခဏာတွေ သတိပြုမိပါက supplements (ဖြည့်စွက်ဆေး) မသောက်ခင်မှာ ဆရာဝန်နဲ့ အရင်ဆုံးပြသပါ။ မျှတတဲ့ အစားအစာက အခြားသော ဗီတာမင်နဲ့ သတ္တုဓါတ် ချို့တဲ့မှု အန္တရာယ်တွေကို လျော့နည်းစေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကလေးကို အသီးအနှံနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို တစ်နေ့လျှင် အနည်းဆုံး ငါးကြိမ်ကျွေးပါ။
Previous articleကလေးများအတွက် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဖန်စီဝတ်စုံ အိုင်ဒီယာ ၁၃ခု
Next articleသင့်ရဲ့ကလေးတွေရဲ့ screen time စွဲလမ်းမှုကို ချိုးဖျက်နိုင်မယ့် အဆင့် (၃) ဆင့်